Expert De Semalt Yanikeza Iziphakamiso SEO Precieux Sur La Façon Ukuthuthukisa Ukusebenza Kwendawo Yakho
Eqinisweni, kunezici eziningi ezibalulekile okumele zibheke lapho kudala khona isayithi lewebhu. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe kwamakhasi we-plugin, qhafaza ukuthola ukwaziswa kwakho kwe-intanethi kwi-intanethi. Ngaphezu kwalokho, kubaluleke kakhulu ukuthulukisa ukwaneliseka kwalabo abaklayenti / ama-lecteur. Yonke into ingahle ibe yindlela enhle yokusiza izinkampani zokusesha (SEO) ukuze uthole ama-Web sites - custom made wedding hats. Ngesibalo sokuhlola, isayithi lakho lewebhu lithola ukulungiswa kokuzijabulisa.
I-difficulty, okuyiyona iningi lezinkampani ezibhekene nazo, ukuthi izikhungo zokusesha zithuthukisa futhi zishintsha njalo ama-algorithm, okudingekile ukuthi umsebenzi we-specialists, ohambisane nalezi zindaba ezisezingeni le-referencement. I-Artem Abgarian, i-responsable de la réussite client de i-Semalt chaza ukuthi yini ongayenza ukuze uthuthukise ukusebenza kwendawo yakho.
Ukuthuthukisa izithombe zesayithi
Saviez-vous que chaque image sur votre site peut être optimisée? Yebo, le titre que vous donnez à l'image et la taille de l'image peuvent tous refleter une bonne pratique SEO. Ungakwazi ukuzenza izithombe zakho, bese ukhiqiza i-moteur de recherche amicale ngokubamba isithombe ngasinye. Uma usebenzisa i-Web, bheka izithombe ze-Web site yakho zizobanjwa ngaphakathi. Ukunciphisa izithombe zakho kusiza ukufaka okusheshayo kokulayisha kuWebhu, lokhu kungakwenza ngcono i-Web site yakho. Donnez à l'image un titre centré sur les mots clés qui aidera les clients à trouver exact ce que ils cherchent.
U-Avez-vous usuvele ucacile kwi-Web site, uthele ukuthi ufuna ukuthola indawo? Hhayi, la plupart des gens quitent ces sites et ne revient jamais. Wena ungafuni ukuthi iwebhusayithi yakho ibe yilabo abantu ababa khona ngaphambi kokuba babone lokho okunikezayo! Uma ufuna ukuvimbela ingxenye yakho ye-site, ungazitholela amalungu akho abasebenzisi, ungene ngemvume ngalokhu kuphela. I-Laisser la page de destination ehambayo mahhala. Ukuhlukunyezwa kwamafomu okungafani nawo, kanye nokukhangisa kwe-detectors, kanye nezintambo ze-fenêtres contextuelles..
Lezi zinjini zokudinga zidinga izingosi ukuze zivuselele okuqukethwe kwazo njalo ukuze zikwazi ukunikeza abasebenzisi ulwazi oluthembekile nangesikhathi esifanele. Uma ngabe kunjalo, amawebhusayithi ahlose ukufaka ama-algorithm ayedlule. Ukuba ne-blog kuyindlela engafanele yokuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho ayikhiphi i-Webcam yakho.
Khetha izinhlamvu ze-URL
Yenza i-URL ye-URL ye-URL ehambisana nayo ngokufaka izinsizakalo ezinikezwayo kwi-URL noma ngokukhetha igama elihle lokufaka i-URL yakho. Ukufakwa kwe-location noma indawo ye-geographical e-URL yakho kungasiza futhi ama-moteurs de recherche ukuze bakhokhele amakhasimende akho kuwebhu.
Ukusebenza kweselula mobile
In a world of plus en plus mobile, i-Google ilahlekile manje i-algorithme ekhethekile yokuthungatha ama-Web mobiles. Dlulisa lesi sizathu, iwebhusayithi yakho kumele isetshenziselwe ukufaka amakholi wefoni noma i-risquer d'être pénalisé. I-web design yakho ye-concepteur kumele ikwazi ukukhetha i-web design ephathekayo ehambisana ne-mobile phones. Ungalokothi ubandakanye futhi ingxenye yombuzo FAQ kulabo abathanda ukufuna amagama.
Ukufakwa kwesilinganiso sokushaja
Uma kukhona konke okushiwo, qhafaza ukusebenza emsebenzini wokulayisha kwakho Iwebhusayithi. Ukukhathazeka kwabantu akuyona isikhathi eside, futhi ngakho-ke uma isayithi lakho lithatha isikhathi esithile ukushaja, amathuba okuba ulahlekelwe kakhulu kunamakhasimende okuthandayo. Kungaba isizathu sokuthi i-Web site yakho ayiyikuguqula futhi njengoba kufanele. Cabanga konke okungase kube lula ukuvuselela indawo yakho, ama-plugins ama-boutons we-partage de médias sociaux, kanye nemifanekiso enhle ekhasini lakho.
Ngaphandle kokuthi ikhasi le-design ne-conception libalulekile, qaphela ukuthi i-referencement est le factor et le plus important qui influencent les performances de votre site. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Semalt , ukungaboni kahle le nkinga yakho yokusebenza kungabangela ukungasebenzi kwemisebenzi yakho yokuthengisa.